Ny Valosoa Vaovao, 19 Jolay 2018. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← FJKM Ambohibe Ilafy Fitahiana, Fivoriambe faha 22. Marc Ravalomanana.
FJKM Synodam-parintany, Soavimbazaha Miarinarivo, 20 Jolay 2018. Marc Ravalomanana. →
Ny Valosoa Vaovao, 19 Jolay 2018.
Mila olona sahy i Madagasikara
Vao niverina tamin’ny fahaleovantenany ity firenena ity, dia nampitolefehana tamin’ny sangodim-panina politikam-panjanahana amin’ny endriny vaovao. Narovana fatratra sy nafenina tsy ho fantatry ny vahoaka Malagasy fa olona voavolavola tsara natao hiaro ny tombontsoa frantsay ihany no tsy maintsy apetraka eo amin’ny fitondrana sy hifehy ny vahoaka. Olona niainga avy ao anatin’ny vondron’olona noforonina hanohitra ny fikambanan’ireo tia tanindrazana vonona hiaro marina ny tombontsoan’ny sarambabem-bahoaka. Dia niaraha-nahalala ny tantara nisongadinan’ireo fikambanana roa ary ilay mpanohitra nanaiky natao fitaovana hanapotehana iry mifanohitra sy mifaninana aminy.
Tsy atao hahagaga raha ireto fitaovam-bazaha, voasasa ati-doha hiankohoka amin’ny Lafrantsa ary notohanany sy nanaovany tsindry mazava loatra, no nahazo laka sy nametraka ny olony teo amin’ny fitondrana. Aretina iray lehibe saro-tsitranina nikiky ny ain-dehiben’ny fampandrosoana ny firenena io, ary mbola mitohy mandraka androany. Ny zava-misy sy tsikaritry ny mpandinika mantsy dia tsy mitsahatra mihazona ny fahefana eto amin’ny firenena ireo vondron’olona ireo izay tany am-piandohan’ny namatorana an’i Madagasikara « mahaleotena » sy nodimbiasin’ireo taranany marobe ankehitriny. Ireto farany mpandimby ny anaran-dray sy mpanindrahindra ny anaran-d « reniny » dia toy ny “basin’angalisy”ihany, hoy ny fitenenana, “ka ny feon-dreniny ihany no feon-janany”. Izy ireo no mpanamboamboatra ny tantara marina tokony ho fanta-bahoaka hamily azy ho amin’ny tombontsoany sy ny Mpitondra frantsay. Io fanodinkodinana na fanafenana ny tantara io no anisan’ny fositra iray lehibe ihany koa mahatonga ity firenentsika ity ho amin’izao toerany izao.
Inona no vahaolana? Tsy misy afa-tsy ny fahasahiana manapaka ilay tadim-poitra nanomezana sakafo an-jaza izay efa vita fantin’izy mihevi-tena ho lehibe, satria heverina sy atao toy ny zaza mandrakariva ny Malagasy, 58 taona nahaleotena. Iza no mpitarika politika eto amin’ny firenena na mpitondra nahazo fahefana sahy hilaza toa ny filoha Roandey, Paul Kagamé, hoe “tsy mila mpitaiza zaza (baby sitter) izahay”mantsy ireo firenen-dehibe? Vahaolana ihany koa ny fanapahana ilay” fantsona” lehibe nitrohana tsy an-drariny, tsy nisy tombontsoa ho an’ny vahoaka Malagasy, ny harembe tsy hita pesimpesenina teto amin’ny firenena nandritry ny taona maro izay, ary mbola ezahina fikirina hatrany mba haharitra aman-taonany maro ho avy. Izay olona sahy hilaza sy hanatanteraka izany no hany afaka hanavotra ity firenena ity ao anatin’izao toerana misy azy izao.
Izany olona izany mantsy tsy isalasalana fa tsy avy amin’ny taranak’ireo niray petsapetsa nanaiky namatotra an’i Madagasikara nanomboka tamin’ny taona 1960.
Fiainam-pirenena: manararaotra mivoaka faramparany any ivelany Rajao
Tsy afaka hihemotra intsony, angamba, ny Malagasy fa tsy maintsy hiroso amin’ny fifidianana satria efa maro ny antoko politika vonona hanatanteraka izany. Ny governemanta vaovao koa tarihan’ny lehibeny, Ntsay Christian, dia efa namoaka ny daty na dia voalazan’ny Lalàmpanorenana aza fa maintany no tsy maintsy hatao izany. Ny vondrona iraisam-pirenena koa dia efa mamporisika sy mamatsy vola sady manaiky ny daty naroson’ny mpitondra mba tsy hilazana fa baiko avy aminy izany. Manome fotoana lavalava an’i Rajaonarimampianina Hery hipetrahany eo amin’ny sezany io daty io satria raha ny volana aogositra, maintany, tokoa mantsy, araka ny daty naroson’ny Vaoamiera Mahaleotena momba ny Fifidianana (CENI) dia efa nametra-pialana izy tamin’ny volana jona. Azo heverina fa toromarika avy aminy io daty io satria efa zatra nanitsakitsaka ny Lalàmpanorenana izao fitondrana HVM izao. Manararaotra farany ny mbola maha eo azy Rajaonarimampianina Hery ka mivoaka any ivelany manatrika fivoriana an-tampony.
Tsara ho marihana anefa fa vola an-tapitrisa dolara maro no lany amin’izany kanefa ny fitakian’ny sendika isan-tokony ny zony sy ny fahantran’ny vahoaka Malagasy, sivifolo isan-jato mahery, hodiana tsy raharahiana fotsiny izao. Tohin’ny tolona ho an’ny fanovana izay efa nitsahatra anefa ireo fitakiana sendikaly ireo ary tsara hampahatsiahivina fa ny lalàm-pifidianana nolanian’ny depiote “79” no niandohan’ny tolona. Tsy fantatra mazava anefa ny tena votoatin’ilay lalàm-pifidianana nasian’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ary nosoniavin’ny filohan’ny Repoblika hanan-kery.
Rehefa tafatsangana ny governemantan’ny marimaritra iraisana dia nandao ny teny an-kianja ny Mapar na dia tsy nekena aza ny fanendrena minisitra HVM efatra ambinifolo (14). Ity tranga iray ity dia mbola manaporofo fa tsy matihanina ny politisiana gasy fa rehefa nahita hirika nahatafidirana ao anaty fitondrana dia hodiana tsy fantatra intsony izay nifanarahana tany am-boalohany. Nifarana tamin’izay koa ny “miara-manonja” satria nahavaivay ny fanakianana nataon’ny olona niditra nivantana. Marina, angamba, fa Rajoelina Andry no nanolotra ny praiminisitra, na izany na tsy izany anefa dia tsy nifanarahan’ny Mapar rehetra izany raha araka ny fanehoan-kevitry ny sasany tamin’izy ireo teny an-kianja. Tsara ny fanarahana ny fitsipiky ny antoko kanefa na inona na inona, na ahoana na ahoana, rehefa nibirioka any amin’ny tsy tokony halehany ny zavatra dia tsy maintsy mijoro izay mahatsapa ny tsy maha ara-drariny sy hitsiny ny fanapahan-kevitra. Niaraha- nahatadidy ny nolazain-dRavalomanana Marc fa tsy nisy nidirany na ny antoko TIM iny tolona ho an’ny fanovana iny fa andraikitra noraisin’ny solombavambahoaka madiodio.
Tsy mitombona koa ny filazana fa rehefa ao anatiny dia afaka hanova ny politika efa nosoritan’ny HVM hanatanterahana ny fifidianana satria maro an’isa (49) ny depiote Mapar tao amin’ny Antenimieram-pirenena, kanefa tsy ampy hery nentina nanoherana ny fandaniana volavolan-dalàna noketrehan’ireo depiote mpomba ny HVM. Ankehitriny ampahafirin’ny mpikambana ao amin’ny governemanta no Mapar ka ho afaka hifanandrina amin’ireo HVM na dia lazaina fa olon-dRajoelina Andry aza ny Praiminisitra. Ankilany koa tsy misy filaminan-tsaina ny Malagasy noho ny tsy fandriampahalemana ka tsy hisy fifantohana amin’izany fifidianana izany velively.
Tsy fantatra intsony na iraka ireo jiolahy manafika sy manao fakana an-keriny satria mahalasa saina ihany ny fananan’izy ireny fitaovam-piadiana izay tsy misy tokony hanana ankoatry ny mpitandro ny filaminana ihany ary volabe hatrany no takiany rehefa manao ny asa ratsiny izy ireny. Miara-manaiky ny rehetra fa tsy nitondra filaminana ny fifidianana, amin’ny ankapobeny, taorian’ny fivoahan’ny vokatra, saingy amin’ity indray mitoraka ity dia volana maro mialoha dia tsy milamina ny fiainam-pirenena. Vakiana fotsiny ny antony satria na dia misy mitory fa “ny fitiavana no lehibe indrindra” dia manjavozavo izany satria ao ny fitiavan-tena, ny fitiavan-tseza, ny fitiavam-pahefana, ny fitiavam-bola sy harena ka tsy azo itokisana ny olona namotika sy nampahantra ny vahoaka sy ny firenena no nilatsahan’ny “Fanahy Masina” tampoka teo, ka hanavotra azy indray.
Niara-nitavana ny harem-pirenena na ny mpitondra ny tetezamita izay mbola ampahany betsaka amin’izao Repoblika IV gidragidra ny mbola hampitombo izany indray no katsahina ankehitriny matoa mbola afaka miara-dàlana indray. Tsy mbola tafavoaka ny ala anefa ka aza mbola misioka satria efa manan-tsaina hanavaka ny amboadia mitafy hodi-janak’ondry sy ny ondry ny ankamaroan’ny Malagasy. Na izany na tsy izany raha mbola toy izao ny fisainan’ny politisiana gasy dia tsy hifarana aorian’ny fifidianana akory ny gidragidra.
Minisitra Guy Rivo R.
Vonona hamaha ny olana eo amin’ny orinasa afak’haba
Nandray ny solontenan ‘ireo tompona orin’asa afak’haba ny minisitry ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, Guy rivo Randrianarisoa omaly maraina. Nampisy fanantenana ny fihaonana teo amin’ny roa tonta izay vao sambany nisy hatramin’izay araka ny nambaran’i Tiana Andria satria nanehoan’izy ireo ny olana mianjady amin ‘ny orin’asa afakaba eto Madagasikara. Voalohany izahay hoy ity farany no mba noraisin’ny minisitra tompon’andraikitra tao amin’ny minisiteran’ny Indostria hitenenanay ny maharary anay . Misy ihany no efa voavaha fa ny resaka famoahana entana any Toamasina no tena olana amin’izao .
Hisaorana ny minisitra Guy Rivo Randrianarisoa fa hamaha ny olana mianjady aminay araka ny nambarany , hidina mivantana any Toamasina izy , eo koa ny firesahany amin’ny tompon’andraikitra ary hitondra izany eo anatrehan’ny filan-kevitry ny minisitra . Solontena ihany izahay no tonga eto mihaona amin’ny minisitra hoy Tina Andria fa raha ny fisian’ny olana eto Madagasikara dia voavaha raha misy ny fiaraha-miasa eo fanjakana sy ny tsy miankina . Ny mampalahelo mantsy hoy izy dia lasa any amin’ny karaman’ny mpiasa no miantraika ilay fahasahiranana , tsy maintsy alefa fiaramanidina ny entana rehetra amin’izao , lasa midangana ny mason-karena . Mampanantena izahay hoy ireto mpandraharaha fa raha mazava ny fotodrafitr’asa dia ao anatin’ny 3volana dia hisy asa omena ireo tanora miisa 20000 eto Madagasikara ao anatin’ny 3 volana.
Fanendrena ny Kolonely Joseph Ramiaramanana
Ny HVM ihany no MAPAR
Miha- mazava ankehitriny ny fandehan’ny raharaha-politika eto Madagasikara fa iray ihany ny HVM sy ny MAPAR , tsy voatery hoe miara-miasa na tsia izy ireo fa ny tanjona dia iray ihany , fahavalo politikan’izy ireo sy atahorany mafy ny filoha Marc Ravalomanana, ka tsy maintsy hampitoviana ny tadin-dokanga . Manamarina izany ny nanendrena ny kolonely Joseph Ramiaramanana filohan’ny delegasiona manokan’ny tanànan’Antananarivo teo aloha, notendren’ny fitondràna HVM ho sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany rehefa lany ho ben’ny Tanànan’Antananarivo i Neny Lalao Ravalomanana .
Maro ny fanenjehana nataon’ity kolonely ity ny ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana sy ny Filoha Marc Ravalomanana tamin’izany , nampiasa ny fahefany mihintsy ity kolonely ity niditra ankeriny teny Anosipatrana naka ny fiara tsy ara-dalàna nahiboka ( fourrière ) tao tamin’ny andro alina nitondra miaramila milanja fitaovam-piadiana mahery vaika . Tsy niraharaha ny tompon’andraikitry ny CUA mihintsy izy tamin’izany nitondra ireo EMMOREG hamaky ny vavahady niditra tao Anosipatrana .
Matoa ny kolonely Joseph Ramiaramanana mbola notendrena ho sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany dia misy antony ao fa tsy tongatonga ho azy izany, mbola notendren-dRazanamahasoa Christine ho sekretera jeneraly tokoa izy, izay ministra MAPAR, ka izany no midika fa ny HVM ihany no MAPAR.
Kaominina Antsirabe Renivohitra
Mikorontana tanteraka ny fitantanana azy
Mikorontana tanteraka ary tsy mandeha amin’ny laoniny ny fitantanana ny tananan’Antsirabe rah any nambaran’ireo mpanolontsainan’ny Tanana maro an’isa. Tsy arak any fahitana ny fihetsiketsehan’ny Ben’ny Tanana etsy sy eroa amin’ny alalan’ilay fikambanan’ny Ben’ny Tanana mantsy ny fitantanana an’Antsirabe fa tena gaboraraka sy tsy ara-dalana tanteraka. Efa notanterina teto moa fa nisy ny fanampahan-kevitra hosoka nataon’ny fiadidiana ny Tanana tamin’ny nangatahana ny famatsiam-bola FDL, izay nitondra ny laharana 001 ny 14 Febroary 2018 lasa teo, ka nanaovan’ireo mpanolontsaina fitarainana teny anivon’ny Prefektiora ary namafisin’ny tompon’andraikitra tao tamin’izany fa tena tsy ara-dalàna tokoa izany.
Vokany dia nampiantso fivoriana tsy ara-potoana ny fiadidiana ny mpanolontsaina, izay tokony ho natao ny 17, 18, 19 Jolay 2018 izao saingy nandà sy nitsipaka izany ireo mpanolon-tsaina avy amin’ny TIM sy ny avy ao amin’ny “Iray ihany isika”, ka nivoaka ny efitrano fivoriana izy ireo. Nambaran’izy ireo mantsy fa raha ny laha-dinika dia fandravana ilay fanampahan-kevitra hosoka tamin’ny volana Febroary izay efa nambaran’ny Prefektiora fa tsy ara-dalàna no hatao ary hamoaka fanampahan-kevitra vaovao ka tsy mety amin’izy ireo izany. Isan’ny laha-dinika ihany koa ny fanitsiana ny teti-bola 2018 kanefa ny tatitra ara-bola taona 2017 sy ny teti-bola 2018 aza tsy mbola nandalo fanampahan-kevitra teo anivon’ny mpanolon-tsaina akory ary farany moa dia nambaran’izy ireo fa tsy mbola nifarana ny tsy fifankazahoan-kevitra eo amin’ny fanovana sy fanavaozana ny Biraon’ny mpanolon-tsaina, izay angatahan’izy ireo fandravana tanteraka nohon’ny fahadisoana bevava efa vitan’io birao io.
Andrasana ny fivoaran’ny raharaha ary miantso ny fitondrana foibe ireo mpanolontsaina mba hijeren’ny fitondram-panjakana ny fitantanana ny kaominina Antsirabe ity fa toa be fihetsiketsehana ivelany fotsiny ny ben’ny Tanana, kanefa ny ao anatiny ao tsy misy mandeha amin’ny laoniny, raha tsy hilaza ny tsy fandoavana ny karaman’ny mpiasa hatramin’izao, izay efa mananika ny 9 vola amin’izao fotoana raha to aka 4 vola izany, nialàn’ny PDS teo.
Fampianarana teknika sy fanofanana arak’asa
Hanampy ny ministera amin’ny fanofanana ny UNFPA
Hanampy ny ministeran’ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa ny UNFPA na ny Tahirin’ny Firenena Mikambana ho an’ny Mponina, amin’ny famerenana ireo tanora vehivavy tratry ny aretina mamany lava eo anivon’ny fiaraha-monina, amin’ny alalan’ny fanofanana azy ireo ara-teknika sy arak’asa. Anisan’ny nisongadina io ny talata tolakandro teo ; tetsy amin’ny Complexe Ampefiloha nandritra ny fihaonana teo amin’ny solontenan’ny UNFPA eto amintsika tamin’ny Ministry ny fampianarana ara-teknika sy fanofanana arak’asa Rahantasoa Lydia.
Hanampy amin’ny fanofanana ieo tovovavy tratry ny herisetra ihany koa ny UNFPA, ary ireo tovovavy miteraka aloha loatra ho fampidirana azy ireo amin’ny tsenan’ny asa sy ny fanofanana araka ny fanazavana tao aorian’ny fihaonana nataon’ny Ministry ny Fampianarana ara-teknika sy ny Fanofanana arak’asa Rahantasoa Lydia. Ankoatra izany, vola mitentina 1 alina Dolara Amerikana no anisan’ny hanampian’ny UNFPA ny ministera amin’ny fanofanana tanora, hatramin’izao, mbola ny 15% ny asa ihany no tanteraka noho ny olana politika teto amintsika teo aloha teo. Noho izay antony izay, hafainganina izany fiaraha-miasa izany.
Savorovoro tao Vakinankaratra
Nivory maika ny OMC
Sahiran-tsaina tanteraka ny tompon’andriakitry ny filaminana eto Vakinankaratra amin’ity savorovoro tsy ankiato mitranga tato ho ato ity. Saika fifandonana miteraka fifamonoana mihitsy no mitranga amin’izao fotoana, izay toa lainga sy ki-honohono hatrany no fiandohany. Rehefa tena miroso lalina amin’ny fanadihadiana ny mpanao gazety dia hita porofo, araka ny nambaran’ny lehiben’ny fokontany, toy ny tany amin’ny kaominina Ambohimasina sy ny tao Betafo fa tsy mbola nisy fitarainana fahaverezana zaza na olona tamin’ireo toerana nitrangana savorovoro ireo kanefa dia saika izany fangalarana olona sy taova ary zaza izany hatrany no resaka miely etsy sy eroa ary tonga any amin’ny fifandonana sy fandrobana fananan’olona hatrany ny resaka.
Mampametram-panontaniana araka izany ny tena anton’ny trangan-javatra tato ho ato ity, izay ahiana hiitatra any amin’ireo distrika sasany izany. Manoloana izany dia nivory maika ireo tompon’andraikitry ny filaminana teto Vakinankaratra, notarihin-dRamatoa Andriantomponera Voahangy, Prefet-n’Antsirabe miadidy an’i Vakinankaratra, ka nandray fanapahan-kevitra maika niantso fitoniana ho an’ny mponina manoloana ny ki-tsahotsaho isan-karazany ary hampandre ny mpitandro filaminana raha misy tranga mampiahiahy, nanambara ihany koa izy ireo fa hisy ny fanafangainana ny fanadihadiana hiarahan’ny mpitandro filaminana dia ny zandary sy ny polisim-pirenena izany mba hazava kokoa ny raharaha, hisy ny fanaraha-maso ny fivezivezana amin’ny alina manomboka izao eto Vakinankaratra, izay arahina fepetra hentitra amin’izay fivezivezena amin’ny alina izay.
Ho hita eo ny vokatry ity fepetra raisina ity satria raha ny tsilian-tsofina dia efa nisy ny olona nosamborina na tany amin’ny resaka Antsahondra na ny tany Betafo farany teo, izay anaovana fanadihadiana lalina ireo olona ireo fa tsy nogadraina akory.
Tsy tokony hikoso-maso manoloana ny mpitondra ny mpampianatra
Milaza ny heviny momba ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao ny mpanao politika James Ratsima. Tsy mety intsony ny mangina hoy izy. Ho anareo fitondrana hoy izy anjaranareo no sady adidy sy andraikitrareo ny mamaha io olan’ny mpampianatra io satria tompoko olana sendikaly io fa tsy olana politika. Hanakorontana indray ve ianareo ? mitady vola hanaovana fifidianana satria teren’ ny vahiny hanao amboletra io fifidianana io? ny marina dia ianareo fitondrana no tompon’andraikitra 100% amin’izao fikorontanana izao, aza heverinareo ho dondrona sy vendrana ohatranareo ny mpampianatra tompoko.
Ho anareo mpampianatra aza mikoso maso amin’ny famoretana sy fanaovana tsinontsinona anareo satria ianareo mpanabe no mitondra hazavana amin’ireo fitondrana mpamitaka vahoaka ireo, mibaribary fa fitadiavana tombontsoa manokana no ataona’ireo fitondrana ireo. Ho antsika rehetra mpianatra isan’ ambaratonga, ny maha zoky ahy, ny maha Ray amandreny ahy ary indrindra ny maha mpanabe ahy ‘no miteny aminareo tsy misorona, aza manaiky atao fitaovana hamonoana afo ianareo, sanatria ve dia hasolo ny mpitandro filaminana hamono afo koa ianareo.
Ary farany ho anareoo Zanaka sy zandry milaza hanalana fanadinana homeo tanana ny mpampianatra anareo fa ireo ‘no tompon’ny ho avinareo, tereo ny fitondrana hamaha ny olan’ny mpampianatra satria olana nataon’ny fitondrana io, mazava fa resaka fifidianana ho ataon’ny vahiny mpananibohitra amboletra hamotehana ny taranaka Malagasy io. Mbola amimpitiavana no itenenako, zanakareo mpitondra fanjakana ireo anie ka Zanaka Malagasy e !
Tanora very asa, mitaky ny zon’ny mpiasa maherin’ny 102
Tanora miisa 102 no nesorin’ny tomponandraikitry ny orin’asa mpanodina sy mpamokatra taretra SIFOR any Faradofay. Nanao ny fivoriany tao amin’ny EPP Amboanato izy ireo ny faran’ny herinandro teo. Fivoriana notarihan’ny filohan’ny sendikan’ny mpiasa avy aty Antananarivo. Tamin’izany no nampahafantarana ny zava-misy sy ny hetsika tokony hatao amin’ny fitakiana ny zon’ireo mpiasa ireo.
Tokana ny takin’ireto mpiasa very asa ireto dia ny famerenana azy ireo amin’ny asany na ny fanomezana ny karamany, izay voafaritry ny lalànan’ny asa. Marihina fa efa mahafantatra ity tranga ity ny tomponandraikitry ny asa sy ny lalàna sosialy any an-toerana. Mihevitra ny hanao fitokonana sendikaly ireto mpiasa ao amin’ny SIFOR ireto .
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Ny Valosoa 19 Jolay 2018. Ajoutez ce permalien à vos favoris.